प्रदेश नामकरण र राजधानी निर्धारणमा ‘हेडक्वाटर’ हावी - फ्री प्रेस नेपाल
१० चैत्र २०७६, सोमबार ०६:३४
२७ पुस २०७६ मा प्रदेश–३ को संसद् (प्रदेश सभा)ले सो प्रदेशको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा तोक्ने निर्णय गरेपछि दुई वर्षदेखि अड्किएको यस सम्बन्धी बहस तत्काललाई किनारा लागेको छ । प्रदेश सभामा राजधानी र नामलाई लिएर निरन्तर रस्साकस्सी चल्दै आइरहेको थियो । नेकपाको दुईतिहाइ मत रहेको यो प्रदेशमा त्यही दलका अधिकांश सदस्यले वागमती र हेटौंडा विरुद्ध सदन र सडकमा आवाज चर्काउन थालेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, ‘हेडक्वाटर’ अर्थात् पार्टी नेतृत्वको साथ खोज्न काठमाडौं उक्लिए । यसअघि, प्रदेश–५ को राजधानी तोक्ने विवाद पनि सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसैगरी ‘हेडक्वाटर’ मार्फत नै टुंग्याएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरू पौडेल र पोखरेल मात्र होइन; पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति ‘ककस’ बनाई ‘तमुवान मगरात प्रदेश नाम राख्न ज्यानको बलिदान दिन समेत तयार’ पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गण्डकी प्रदेशको न्वारान पनि नेकपाको ‘हेडक्वाटर’ले नै गरिदिएको थियो । कुनैवेला आफैंले प्रस्तावित गरेको तमुवान मगरात प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि गुरुङ कतिसम्म निरीह बने भने उनीसँग सभ्यता बुझाउने सम्मको नाम गण्डक प्रदेश राख्ने सामथ्र्य समेत बाँकी रहेन । ‘हेडक्वाटर’को हस्तक्षेपलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्ततः आशीर्वादका रूपमा ग्रहण गरे । यसरी प्रदेश–४ र ५ को नजीर प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्रीका निम्ति पनि मार्गनिर्देशक बन्न पुग्यो ।
प्रदेश–३ को नाम नेवाः ताम्सालिङ वा नेपालमण्डल र राजधानी काभ्रे हुनुपर्ने भन्दै चलेको अन्तरपार्टी संघर्ष टुंग्याउन नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले राजधानी हेटौंडा र प्रदेशको नाम वागमती तोक्न प्रदेश पार्टी कमिटी मार्फत प्रदेश सभालाई निर्देशन दियो । पार्टीको यो निर्देशन कसैले नमान्ने देखिएमा प्रदेश सभामा ह्वीप लगाउन समेत भनिएको थियो । शुरूमा वागमती र हेटौंडा को विपक्षमा बोलिरहेकी नेकपा प्रदेश–३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि हेडक्वाटरको निर्देशन पछि ‘निर्णय बेठीक भए पनि पार्टी बचाउन’ भन्दै समर्थनमा उत्रिइन् । नेकपाको जातीय विभागहरूको महासंघ आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालका सह–इन्चार्ज कमानसिं लामाले त आफ्नो पदबाट राजीनामा नै दिए । तर ‘हेडक्वाटर’ले उनको यो कदमलाई कुनै महत्व दिएन । आफ्नो राजीनामा बारे लामा भन्छन्, “पार्टीले संविधानको धारा ५६ मै प्रहार गर्यो । जब संविधानमा व्यवस्था गरिएको आदिवासी जनजातिका मुद्दा नै मिच्ने हो भने तिनका लागि किन संस्था चाहियो भनेर मैले राजीनामा बुझाएको हुँ ।” लामा नेकपा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पनि हुन् ।
लामाको राजीनामाबारे नेकपाले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । लामाको मुख्य असन्तुष्टि पार्टीले संविधान पालना नगरेकोमा छ । उनी भन्छन्, “अहिलेको व्यवस्था ल्याउन जनयुद्ध भयो । थुप्रै आन्दोलन भए । संविधान बनाइयो । देश संघीयतामा गयो । तर अहिले नेतृत्व धमाधम संविधान मिच्दै गइरहेको छ । संघीयता विफल बनाउने अभ्यास गरिंदैछ । यसमा प्रतिपक्ष पनि सँगै हिंडिरहेको छ । म त्यो बाटोमा हिंड्न चाहिनँ, त्यसैले राजीनामा दिएँ ।’
प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी नेकपाको निर्णय प्रति फेसबूकमा स्टाटस लेखेर असन्तुष्टि जनाएका नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको पनि पछि मुख बन्द भयो । तर तामाङ आफू चूप नबसेको आफूले पार्टीभित्र बहुपहिचानको पक्षमा सक्दो लबिइङ गरेको सुनाउँछन् । तामाङ भन्छन्, “बहुजातीय समाजमा हामी एकल पहिचानमा जानुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । बहुपहिचानलाई किनारा लगाई ‘भौगोलिक’ मात्र लागू गर्दा त्यसले भोलि जनतामाझ जाँदा हामी नाजवाफ हुने अवस्था आउने कुरामा पार्टीलाई सचेत गराइरहेको छु । हिजो बनाइएका आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति र दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनाको चित्तबुझ्दो कारण सम्बन्धित समुदायलाई दिइनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा अहिले पनि यथावत् छ ।” २०६८ सालमा शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा तात्कालीन एमाले वागमती अञ्चल कमिटी अन्तर्गत बनेको ‘राज्य पुनर्संरचना अध्ययन कार्यदल’ले वागमती नेवाः ताम्सालिङ नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।
हेडक्वाटरका हेडहरु बाँयाबाट विष्णु पौडेल, ईश्वर पोख्रेल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’
प्रदेश–३ को नामकरण विवाद चर्किंदै गएपछि आफूलाई पहिचानवादी आन्दोलनको प्राधिकार दावी गर्दै आइरहेका नेकपाका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्ट नेताहरू सामु आफूले ‘पहिचानको राजनीति छाडेको’ सम्म भन्न भ्याए । २२ पुस २०७६ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीका प्रदेश–३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल सहित राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागार्इं आदि नेता र मन्त्रीहरूसामु प्रचण्डले “नेपालमा पहिचानको राजनीति मैले थालेको हो । अब मैले त्यो छाडिसकें । अब हामी यस्तोमा अल्झिने होइन । देश विकास गर्ने हो” भनेको कुरा सो बैठकमा सहभागीले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेका थिए । सो बैठकपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत वागमती र हेटौंडा को प्रस्तावमा असन्तुष्ट नेता र प्रदेश सांसद्हरू ‘पार्टी बचाउनुपर्छ’ भन्दै निर्णयको समर्थनमा बोल्न थाले ।
वागमती प्रदेशका नेकपा प्रदेश सभा सदस्य (प्रसस) केशव स्थापितको भनाइमा पार्टीले ह्वीप लगाउने भनेपछि विरोधमा उत्रिएकाहरू पनि आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’ नै गुम्ने भयले हेडक्वाटरको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न बाध्य भए । कतिसम्म भने नेवाः ताम्सालिङ नाम प्रस्ताव गर्न चाहेका पूर्व माओवादी लडाकु तथा सांसद् प्रेम तामाङले ११० सदस्यीय प्रसस मध्येबाट एकजना पनि समर्थक पाउन सकेनन् । पछि प्रदेश सभामा बोल्दै प्रसस तामाङले भने, “यो सदन राता मान्छेले भरिभराउ छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, समावेशिता र पहिचानको कुरा गरेर नथाक्ने मान्छेहरूको भीड छ । तर आज उत्पीडितहरूको आवाज दर्ता गराउन मैले एकजना समर्थक पनि पाउन सकिनँ ।”
नेकपाले मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि ‘वागमती र हेटौंडा’ कै पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानी हेटौंडा को पक्षमा सहमति जुटाउन देउवा बाहेक राप्रपा नेता कमल थापाको पनि भूमिका रहेको ठानिन्छ ।
काठमाडौंले पहिलेदेखि नै हेटौंडालाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखी त्यही अनुरूप नीति–नियम बनाउँदै आएको छ । तात्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रको राजधानी हेटौंडामा नेपाली सेनाको मध्यपृतना, उच्च अदालत जस्ता सत्ता–संयन्त्रहरू रहँदै आएका छन् । राज्यको यो संवेदनशीलतामाथि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एकजुट भएपछि हेटौंडालाई राजधानी बनाउन सहज भएको देखिन्छ ।
वागमती नामकरणभित्र रहेको राजनीति चाहिं अलिक भिन्न छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका निम्ति माओवादीले प्रस्ताव गरेका जातीय पहिचानजन्य प्रदेशका नामहरूमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका खातिर तात्कालीन एमालेले समेत सहमति जनाएको लिखत छ । माओवादीको जातीय पहिचानजन्य नाममा शुरूका वर्षमा वैचारिक प्रतिरोध गर्दै आएको एमालेले पछि माओवादीकै अनुसरण गरेको देखिन्थ्यो । तर दोस्रो संविधानसभा चुनावले माओवादीलाई तेस्रो दलमा खुम्च्याइदिएपछि, जनजाति र मधेशी आन्दोलन स्वाभाविक हिसाबले दुर्बल हुनपुग्यो । त्यसपछि एकीकृत भएका नेकपा एमाले र माओवादी अहिले आफ्ना पुराना लिखत र वाचाहरू सच्याउने या उल्ट्याउने प्रक्रियामा छन् । त्यसैले पूर्व एमाले र माओवादी अहिले कुनैबेला आफैंले प्रस्ताव गरेका जाति, भाषा र क्षेत्र झल्कने नामकरण विरुद्ध स्वयं भिडिरहेका देखिन्छन् ।
प्रचण्डको दुईधारे खेल
पछिल्लो समय पूर्व माओवादी नेता प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो स्थान टिकाइराख्न ‘जातीय पहिचानजन्य प्रदेश नामकरणले बहुजातीय समाजको आकांक्षा भड्किने’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्लेषण अनुरूप चलिरहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक अङ्कगणित ठीक पार्न ‘जे पनि गर्न तम्तयार’ प्रचण्डको ‘मैले पहिचानको मुद्दा छाडें’ भन्ने अभिव्यक्ति त्यही पृष्ठभूमिमा आएको बुझ्न सकिन्छ ।
तर, उनै प्रचण्ड मधेशी–जनजातिका सभा–सम्मेलनहरूमा हिजोकै भाषामा कुर्लिरहेका पनि भेटिन्छन् । थारू समुदायले १ माघ, २०७६ मा टुँडिखेलमा आयोजना गरेको माघी महोत्सवमा उनले आफूले पहिचानको राजनीति त्यागी नसकेको जनाउ दिंदै थारू समुदायलाई आन्दोलन गर्न समेत आह्वान गरे । थारू आन्दोलनका अगुवाहरूले मञ्चबाट र युवाहरूले तल दर्शकदीर्घाबाट बारम्बार ‘हुटिङ’ गरेपछि प्रतिरक्षात्मक भएका प्रचण्डले आफ्नो बचाउ गर्दै त्यहाँ भने “सगरमाथा ठाडो चढ्न सकिंदैन । त्यो उँचाइमा पुग्न कहिले दायाँ, कहिले बायाँ गर्नुपर्छ । कहिले तल झरे जस्तो पनि गर्नुपर्छ । उत्पीडित जनताको मुक्ति नहुँदासम्म म निरन्तर आन्दोलनमा तपाईंहरूसँगै रहिरहनेछु ।”
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारकै जिम्मामा छाडे पनि दलको अह्रनखटनमा चल्ने बानी परिसकेका कुनै पनि प्रदेश सभाले अहिलेसम्म यो अधिकारको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । संविधानको भाग–३३ मा रहेको ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’ को धारा २९५ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतबाट हुने’ व्यवस्था छ । तर अभ्यास चाहिं यसको ठीक उल्टो गरिंदै आएको छ । नाम राखिदिन मुख्यमन्त्रीहरू स्वयं नै पार्टी हेडक्वाटरको हस्तक्षेप आमन्त्रित गरिरहेका देखिन्छन् ।
अहिले नेपालले अभ्यास गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक विधि भनेको जनमतबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले संसद् या प्रदेश सभाभित्र लामो छलफल र विधि प्रक्रिया मार्फत यस्ता बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु हो । तर, वागमती र हेटौंडा नामकरणमा जसरी खुलेर नेकपा–हेडक्वाटरको हस्तक्षेप भयो र ‘माथि’को निर्देशनमा ह्वीप लगाउने सम्मका निर्णय गरियो; बाँकी अन्य प्रदेशमा पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिने देखिन्छ । तर यस्तो व्यवहारले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र अभ्यासलाई किनारा लगाउने निश्चित छ । कुनै खास विधि र सिद्धान्तमा नटेकी मनोगत ढङ्गबाट गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमपछि भएको वागमती प्रदेशको न्वारानले बाँकी प्रदेशहरूको नाम स्वभावतः कोशी या सगरमाथा, मिथिला या मधेश र लुम्बिनी आदि हुनसक्ने जनाउ दिइनै सकेको छ ।
पहिले भिडें, पछि छाडें
प्रदेश–३ मा नेवार र तामाङको बाहुल्य छ । त्यसैले यसको नाम ‘नेवाः ताम्सालिङ वागमती’ या ‘नेपालमण्डल’ राखौं भन्ने साथीहरूको उल्लेख्य संख्या थियो । धेरै छलफल पनि भयो । कोशिश पनि गर्यौं । म डटिरहें । तर बीचैमा नेकपा पार्टी सचिवालयले ‘सर्वसम्मतले निर्णय गरिएको’ भन्दै प्रदेशको नाम ‘वागमती’ र राजधानी ‘हेटौंडा’ तोक्ने निर्णय लागू गर्न निर्देशन दियो ।
पार्टीको स्थायी कमिटीमा यस सम्बन्धमा छलफल नै भएको थिएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक १५ माघ २०७६ बाट शुरू हुँदैथियो । यस्तोमा एकाएक माथिको निर्णय भनेर आएपछि मलाई झ्वाँक चल्यो । मैले बैठकमै भनिदिएँ— ‘म प्रदेशको इन्चार्ज हुँ । नारायण दाहाल कामरेड अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पदाधिकारी छौं । प्रदेश कमिटी छ । हामीसँग कुनै सल्लाह नगरी प्रदेशको नाम राखिएको छ । प्रदेश कमिटीलाई थाहा छैन, इन्चार्जलाई थाहा छैन । माथिकाले टकटक निर्णय गरिदिने ? ठोकिदिने ? यो कुरा त म मान्दै मान्दिनँ । लागू पनि गर्दिनँ ।’
सचिवालयको निर्णय परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरै हिसाबले कोशिश गरियो, तर सकिएन ।
पार्टी सिस्टममा गइसकेपछि अन्तिममा पार्टीको निर्णयलाई आत्मसात् गर्नुपर्दाेरहेछ । पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्ने, निर्देशन नमान्ने गर्दा त्यसले अर्कै चुनौती निम्त्याउने रहेछ । एक्लै लडेर नहुने रहेछ । संघर्ष त गरें, तर सकिनँ । तत्कालीन एमालेले यसलाई ‘नेवाः ताम्सालिङ वागमती’ प्रदेश प्रस्तावित गरेको थियो । तर अहिलेको बहसमा त्यो नाम लामो भयो; नाम त चिटिक्कको पो चाहिन्छ भनेर पन्छाइयो ।
नेकपा वागमती प्रदेश कार्यालयमा ‘नेवाः ताम्सालिङ वागमती र नेपालमण्डल’ नाम दर्ता गरिएको छ । यसको अर्थ यो विषय अझै छलफलमै छ र सोच्न बाँकी छ भन्ने हो । संघीयता र पहिचान स्थापित गर्नकै निम्ति २०६२/६३ को जनक्रान्ति भएको हामीले बिर्सनुहुँदैन ।
नामको मात्र कुरा होइन । नेवार र तामाङ जातिको बाहुल्य भएको यो प्रदेशमा तिनको स्थान कहाँ हुन्छ ? तिनीहरूलाई कसरी
हेरिन्छ ? तिनका मुद्दा कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? सरकारमा विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति हुँदा तिनलाई कसरी समाहित गरिन्छ
भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नाम भएन भनेर हामी चूपचाप बस्यौं भने केही हुँदैन । तर हामी निरन्तर लागिरहँदा, पहिचानको लडाइँ लड्दै जाँदा निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न सकियो भने धेरै कुरा बदल्न सकिन्छ । त्यही भएर पहिला निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्यो । त्यसका लागि एक्लै भए पनि लडिरहनुपर्दछ । हार मान्नुहुँदैन । म एक्लै भए पनि विधि र न्यायिक आवाजका निम्ति सधैं डटिरहनेछु, लडिरहनेछु ।
मेरो अडान अहिले पनि उही छ— ‘सचिवालयको निर्णय विधिसम्मत भएन । मिच्ने काम भयो । हामी लोकतन्त्रमा छौं । कुनै पनि काम गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कार हामीसँग हुनुपर्छ । जतिसुकै चित्त नबुझेको भए पनि तपाईंले कुनै निर्णय लिनका लागि छलफल गर्नैपर्छ । मेरो मतलाई नमान्ला भनेर आत्तिएर त्यो समितिमै नराखेर पनि हुन्छ र ? राख्नुपर्यो । छलफल गर्नुपर्यो । तर्क गर्नुपर्यो। त्यसमा सहमति असहमति होलान् । तर छलफलमा राख्दै नराख्ने काम लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । विधिसम्मत व्यवहार होइन ।
नेकपा, वागमती प्रदेश कमिटी इन्चार्ज शाक्यसंग गरिएको वार्तामा आधारित
-नीति-विमर्श मासिक फागुन अंकमा प्रकाशित